Kabashada Data waa in la hubiyo in ay ka kooban drive adag ayaa la soo celiyay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka mid ah iyadoo la kaashanayo ku dhisay functionalities of computer ama ku rakibidda barnaamij kasta oo software xisbiga saddexaad. Sida ugu wanaagsan ee looga fogaado dhibaatooyinka gebi ahaanba waa ay hubiyaan in diyaarinta ku filan ayaa laga sameeyey arrintan la xiriira si kabashada Masiibada ama DR qorshe lagu bilaabay ayaa laga yaabaa. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user helo aqoon ku saabsan barnaamijyada software 5 kabashada xogta ugu muhiimsan ee laga heli karo suuqa. Waxa kale oo hubin doona in user helo in la ogaado interface si fulinta amarrada kala duwan noqdo mid fudud oo wax ku ool ah.
5 qalab kabashada in ay ka shaqeeyaan Linux
Liiska in goor dambe la soo sheegnay doonaa ka kooban kuwa barnaamijyada kuwaas oo keliya ma aha ee tayo sare leh, laakiin sidoo kale in la hubiyo in dib u soo kabashada xogta la sameeyo fudud oo toos ah oo dhammaan dadka isticmaala oo u isticmaalaya Linux laakiin aan casriga ah ugu xeel dheer oo dhan. Barnaamijyadan waxay tahay oo keliya taagan iyo sabab la mid ah ay shaqeeyaan iyaga u gaar ah oo aan wax kale la rakibo barnaamij software. Waxaa loola jeedaa in kaliya ku rakibidda mid ka mid ah 5 barnaamijyada ku xusan hubiyo in xogta la soo kabsaday kuwa qeybaha kala duwan ee nidaamka Linux ka hawlgala ka halkaas oo aan laga heli karaa ama soo kabsaday isticmaalaya hab dhaqameed ka dhigi doonaa.
1. Samatabbixinta ee aduunka
Barnaamijkan waxa loo arki karaa software ugu wanaagsan ee la heli karo loogu soo kabashada Masiibada ee OS Linux ah. Waxa ay taageertaa oo dhan versions cusub iyo kii hore ee Linux bilaabo i386 in FreeBSD. Muuqaaladan ugu fiican sida ay kaas oo isticmaala ayaa lagu qiimeeyo barnaamijkan waa in ay sidoo kale taageertaa storage devices dibada ka yimaada sida cajalado iyo CD / DVD ee sida qalabka lagu kaydiyo oo gurmad xogta.
Faa'iidada iyo faa'iido darrada
-Wararka Aan ahayn weerar nidaamka file noqon kartaa gurmad isticmaalaya barnaamijkan iyo marka ay timaado dib u soo celinta waxaa la samayn karaa qaab nidaamka file weerar kaas oo sidoo kale ka mid ah xijaab xididka.
-Waxaa maqaal qoruhu disk adag in la habeeyo karo.
Interface -Madaxa barnaamijka waa adag iyo user caadi ah waxaa aad u adag in la isticmaalo.
Qof kasta oo jecel in ay helaan barnaamijyo lacag la'aan ah online iyo wax kasta oo isticmaala sida Test Disk waa boon ah sida ay tahay lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan iyo eedeeyay ma dalban. Waxaa si gaar ah ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in maqaal qoruhu disk lumay waxaa la soo kabsaday qeybaha kala duwan ee disk kuwa ku jira khaanada Downlaods ma go'an yihiin si loo hubiyo in ay u noqdaan Downlaods mar kale. Qamaar ayaa qalad uu keeno fayraska iyo furin sidoo kale loo hagaajin karaa iyadoo la isticmaalayo qalab taas oo ka dhigaysa kabashada xogta aad u deg deg ah oo fudud.
Miiska xijaab -Waxaa loo hagaajin karaa iyadoo la isticmaalayo software iyo haddii Risaalo la tirtiray kac ahayn markaas waxa ay sidoo kale la soo kabsaday karo.
- NTFS gurmad qaybta boot kabashada kale oo suuragal ah.
Barnaamijka -Madaxweynaha furan yahay illaha taas oo ka dhigaysa in dhowr horumarinta yihiin xariirta kaas oo keena cayayaanka iyo khaladaad mararka qaarkood. Waxay sidoo kale keentaa kabashada khaldan xogta.
Oo weliba qalab awood badan oo laga cabsado oo kale taas oo ka dhigaysa hubiyo in xogta soo kabashada waa si degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. Nuqul Safe sida ay magaca soo jeedinaya inuu xaqiijiyo in xogta mugga ilaa inta suurtogalka ah ayaa la soo kabsaday oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Qalabkani waxa uu sidoo kale adeegsanayaa dibadda kaydinta warbaahinta sida CD, DVD iyo Bluray ah isha ugu soo kabashada xogta taas oo ah mid ka mid ah qaababka ugu fiican bixiyey.
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka iyo khasaaro ah oo isticmaalaya qalab loogu soo kabashada xogta Linux:
-It Hubaal nolosha siiya cusub si file in waxa uu ku yaalaa on warbaahinta dhaawacan.
Isticmaalka -Madaxweynaha guud ee qalabka waa mid aad u fudud oo soo kabashada xogta la samayn karaa in qasabno yar.
Ku qeexan yihiin -It qashanka ee tirada disk adag oo keeni laga yaabaa in arrinta inay soo dhiciyaan xogta laga isha.
Waa aalad kale oo cajiib ah in la soo saaro si loo hubiyo in xogta la soo kabsaday ka drives burburay iyo jir adag , CD-ROMS, DVD ROMS kuwaas oo shaqo gaba. Sida magacaba ka muuqata barnaamijka sidoo kale loo isticmaalaa in la hubiyo in xogta la soo kabsaday xasuusta camera digital sidoo kuwaas oo dhab ahaantii waa qaab ka mid ah sawirrada. Waxaa si toos ah u dhaco, waayo xogta iska indha nidaamka faylka meel ay sabab u tahay taas oo xogta laga warbaahinta si xun u dhaawacay sidoo kale la soo celin karin oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Interface -Madaxa barnaamijka u Kordhiyey geynta sida user a laylis sidoo kale ugu shaqeyn karaan barnaamijka si fudud.
Jaceylka ku xusan ka hor soo kabashada xogta laga warbaahinta si xun u dhaawacay sidoo kale waa suurto gal aan arin kasta.
-Again Qalab furan yahay illaha taas oo ka dhigaysa waa doorasho xun kuwa isticmaala oo dhan kuwaas oo ah heer sare ay sabab u tahay kala carar iyo cayayaanka oo la kulantay.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caqliga in ay yihiin xor ah oo furan xigtay. Waxa ku jira ka disk block waxaa soo guuriyeen in drive kale ay barnaamijkan iyo inta ay socoto haddii xogta Read kulan qaladaad ka dibna barnaamijka sameeya ay ugu wanaagsan ee loo hubiyo in xogta la taageeray isla markiiba si drive Ahaado. Waxa kaliya ee user u baahan tahay inaad samayso waa in la hubiyo in file log la akhriyo oo ay maamulaan ee dambe.
Qalab -Waxaa si toos ah u shaqeeyo iyo dib u soo celinta xogta waa mid aad wax ku ool ah oo hufan.
-Waxaa Qaybaha xun ee disk u baahan kulan oo ogaan barnaamijka iyo iftiimiyay.
File log -Madaxweynaha waxaa loo isticmaali karaa in la akhriyo amarrada badan in aad nuqulka meelo kala duwan oo faylasha. Waxay ka dhigaysa nidaamka qas iyo isku dhexyaacaayaan iyo jeer.
Talooyin si ay u maareeyaan Hard Drive on Linux
Ka dib waxaa liiska ugu amarrada muhiim ah in la hubiyo in disk adag waxaa maamula wax ku ool ah iyadoo la isticmaalayo OS Linux ah:
View qoruhu ee drives adag # fdisk -l / Dev / sda amarka waa in la isticmaalo.
Marka Risaalo la abuuray waxaa la formatted karaa iyadoo la isticmaalayo # mkfs.ext3 / Dev / sda7 amarka.
Si aad u aragto tirada Risaalo # fdisk -S / Dev / sda7 4843566 amarkii waa lagu ordo.
Arrimaha miiska Barzakh keeni inta badan arrimaha ku drives adag socda ee Linux OS. Code ayaa laga yaabaa in ling ee isticmaala laylis laakiin waxa ay leedahay in la ordi si la mid ah si looga fogaado in ay adag tahay drive arrimaha la xiriira ee Linux:
Tirada dhululubada for this disk ayaa lagu wadaa inuu 9729.
Waxba kama qaldana waa, laakiin tani waa ka badan 1024,
oo laga yaabo in dhismeedkan qaarkood waxay sababi dhibaatooyin la xiriira:
1) software in waddaa waqti boot (tusaale ahaan, versions jir ah oo LILO )
2) booting iyo partitioning software ka OSS kale
(tusaale ahaan, DOS FDISK, OS / 2 FDISK)
Amarka (m caawimaad): p
255 madaxooda, 63 qaybaha / track, 9729 dhululubada
Units = dhululubada ah 16065 * 512 = 8225280 bytes
aqoonsi Disk: 0xf6edf6ed
/ Dev / sda1 1 1959 FAT32 W95 15735636 c (LBA)
Entries miiska ah Barzakh, ma yihiin si disk
Amarka (m caawimaad): x
Amarka Expert (m caawimaad): f
Amarka Expert (m caawimaad): w
miiska xijaab ayaa la beddelay!
Yeedhay ioctl () in ay dib u akhri miiska xijaab.
> Resource > Ladnaansho > Top 5 Softwares u soo kabashada xogta Linux